Nizeria, Senegal ary Cape Verde no manjaka amin'ny fantsom-pandraisana Hotely Andrefana
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Nizeria, Senegal ary Cape Verde no manjaka amin'ny fantsom-pandraisana Hotely Andrefana
Novambra 14, 2017
Ny tatitra momba ny Hotel Chains Pipeline 2017 dia mampiseho fa ny vondrona hotely dia mila miatrika fotoam-pandrosoana lava any Afrika Andrefana.
Afrika Andrefana no ivon'ny fitomboan'ny kontinanta sy ny fanovana ara-toekarena tao anatin'ny taona vitsivitsy. Na eo aza ny fihemorana mafy niainana tamin'ny 2016 sy 2017, andrasana hiverina indray ny toekarem-paritra amin'ny 2017 ho avy. Ny toekarena miorina amin'ny entam-barotra, toa an'i Nizeria, dia miarina tsikelikely amin'ny fidinan'ny vidin'ny solika sy ny famokarana solika, raha ny firenena toa an'i Côte d'Ivoire, Mali, ary Senegaly kosa dia naneho faharetana ara-toekarena sy fitomboana maharitra. Satria mbola manohy miorim-paka ny ankamaroan'ny firenena - ara-politika sy ara-toekarena - ho tafiditra tsara kokoa ny faritra amin'ny sehatra eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Mampitombo ny filàna fotodrafitrasa fitsangatsanganana sy fampiorenana kalitao ity fampitomboana fampidirana ity.
Ny fitomboan'ny sehatry ny hôtely dia famantarana iray lehibe amin'ny fampiroboroboan'ny tsena ny fotodrafitrasa fitsangatsanganana, ary mifangaro ireo tondro ho an'i Afrika Andrefana. Raha ny tatitry ny W Hotel Hospitality Group an'ny 2017 Hotel Chains Pipeline, Afrika Andrefana dia manana fantsom-pandraisana hotely 114 sy efitrano 20,790, mitentina 42% amin'ny fantsom-pandraisana hotely any Afrika Atsimon'i Sahara. Na izany aza, amin'ireo fifanarahana hotely nosoniavina sy nomanina ireo, dia efitrano 9,875 teo ho eo, na 48% no nifindra tamin'ny fanamboarana. Ho fanampin'izay, ny tetikasa any amin'ny faritra dia manana fe-potoana fampandrosoana maharitra mihoatra ny enina taona eo ho eo, raha ampitahaina amin'ny programa fampandrosoana maharitra roa ka hatramin'ny telo taona izay kasaina matetika. Ny sasany amin'ireo anton'ireny fahatarana ireny dia ny fampiasam-bola avo lenta takiana, ny tsy fahazoana miditra amin'ny safidy famatsiam-bola sahaza, voafetra ny fidirana amin'ny akora, ny fanamboarana ambony ary ny vidin-javatra, ny fiankinan-doha mavesatra amin'ny fanafarana, ny fahaiza-manao teknika tsy ampy hitantanana ny programa fampandrosoana, sy ny hafa sakana amin'ny fidirana.
Amin'ireo fantsom-pandraisana hotely ho an'i Afrika Andrefana, mandray anjara 49.6% na mihoatra ny trano fandraisam-bahiny 10,000 (ao amin'ny trano fandraisam-bahiny 61) i Nizeria. Nizeria koa no tsena lehibe atsy Afrika ho an'ny efitrano kasaina.
Ny tsena lehibe hafa any Afrika Andrefana dia misy ny Cape Verde misy trano fandraisam-bahiny 11 sy efitrano 3,478, ary Senegaly misy trano fandraisam-bahiny 14 sy efitrano 2,164 15,955. Ireo tsena telo ireo dia mandray anjara amin'ny efitrano fandraisam-bahiny 77 XNUMX, na XNUMX% amin'ny fantsom-pandraisana Hotely Andrefana.
Manodidina ny 57% ny fantsom-panafahana any amin'ireo firenena ireo no nifindra toerana, na izany aza ny sasany amin'ireo tetikasa ireo dia nijanona efa ela. Amin'ny firenena iray, toa an'i Nizeria, dia mety hisy dikany izany. Ohatra, ny 40% n'ny fantsom-pirenen'i Nizeria dia vita sonia teo anelanelan'ny 2009 sy 2014, ary araka ny asehon'ilay tabilao etsy ambony, ny ampahany betsaka amin'ireo tetik'asa ireo dia mbola ao anatin'ny dingana "drafitra". Any Senegal dia 44% monja amin'ireo fifanarahana vita sonia no nifindra toerana.
Na dia mamporisika sy manondro ny fahalianan'ny mpampiasa vola be aza ny fantsom-pandraisana hotely mankany amin'ny faritra atsimo, ny tahan'ny tetikasa ambany dia ambany dia mety hampikorontana ny fampandrosoana ny sehatry ny hôtely. Sarotra ihany koa ho an'ireo gadra hotely izay manana drafitra fanitarana amin'ireo tsena ireo miankina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpampiasa vola avy any ivelany sy avy any ivelany ny fampandrosoana ireo hotely ireo. Ny gadra hotely lehibe manerantany dia manana drafitra fanitarana matanjaka hampitomboana ny fisian'izy ireo miasa ao amin'ny kaontinanta, ary any Afrika Andrefana.
Ny paikadim-pitomboana ho an'ireo gadra hotely ireo dia niantehitra tamin'ny fomba nentim-paharazana tamin'ny ekipan'ny fampandrosoana azy ireo nanao sonia fifanarahana hotely hananganana trano vaovao, voalohany indrindra miaraka amin'ireo marika amam-pireneny, miaraka amin'ireo tompona eo an-toerana. Na izany aza, gadona maro kokoa no mampiasa paikady fanitarana famoronana, toy ny fiovam-po sy ny famerenanana ny fananana efa misy, ny fahazoana mpandraharaha hotely eo an-toerana, ny fitomboan'ny modely misy ny franchise, na ny fampivoarana ireo hotely fananana aloha.
Ny solontena zokiolona avy amin'ny vondrona hotely lehibe toa an-dry Hilton, Carlson Rezidor ary Mangalis, ary ireo manampahaizana manokana momba ny hotely dia hifanakalo hevitra momba ny paikadim-pitomboana eo amin'ny tontolo ara-toekarena afrikanina Andrefana izay miova hatrany amin'ny fihaonambem-pirenena momba ny fampiasam-bola any Afrika Andrefana (WAPI) ho avy hatao amin'ny 28 Novambra. & 29 ao amin'ny Eko Hotel, Lagos Nigeria.
Vao tsy ela akory izay i Hilton dia nanambara drafitra hanohanana ny fiovam-po sy ny famerenanana ireo trano fandraisam-bahiny miisa 100 amin'ny alàlan'ny Hilton Africa Growth Initiative, tamin'ny alàlan'ny fanolorana 50 tapitrisa dolara amerikana hanohanana ireo fiovam-po ireo. Naneho hevitra mialoha ny fihaonambe i Mike Collini, filoha lefitry ny fampandrosoana any atsimon'i Sahara, Hilton, nilaza ny fotoana natolotry ny famatsiana hotely tsy ampy. Hoy izy: "Mba hihoarana izany dia mijery ny fanodinana ireo marika serivisy mifantoka amin'ny tsena fototra izahay miaraka amin'ny fifantohana amin'ny vokatra Hilton Garden Inn. Izahay koa dia manao mpisava lalana amin'ny fampiasana fanamboarana modular miaraka amin'ny Hilton Garden Inn any Accra vaovao, izay maodely fananganana haingana sy mahomby amin'ny tompony sy ny mpamorona.
Andrew McLachlan, filoha lefitra zokiolona Carlson Rezidor Africa & Ocean Ocean for Development, dia nilaza tamin'ny resaka mivantana tamin'ny Estate Intel, "Androany dia manana trano fandraisam-bahiny 17 misokatra na eo an-dàlam-pandrosoana izahay ao amin'ny faritra ary ao amin'ny paikadim-pampandrosoana 5 taona vaovao dia nahitanay dimy Tanàna 1 lehibe atsy Afrika Andrefana (Lagos, Abuja, Accra, Abidjan ary Dakar) izay ahitantsika ny tombam-bidin'ny fitomboana… manerana ny faritry ny trano fandraisam-bahiny midadasika. ” McLachlan koa dia naneho hevitra momba ny maodelin'ny fiovan'ny hotely misy, ary nilaza fa mahita vintana ity vondrona ity hampiasa an'io modely io hametrahana ny hotely eo ambany fitantananany, indrindra amin'ny tranga mety tsy hanatanterahan'ilay trano fandraisam-bahiny araka izay fara heriny.
Ny tarika hotelista vaovao sy faritra, Mangalis Hospitality Group, dia mikasa ny hampitombo ny fisiany any Afrika Andrefana, ao anatin'ny dimy taona ho avy. Wessam Oshaka, tao anatin'ny fanambarany tamin'ny Estate Intel dia nanamafy ny "fikasan'izy ireo hampiasa hotely 13 farafaharatsiny amin'ny taona 2020 any Afrika Andrefana." Tamin'ny voalohany dia nifantoka tamin'ny fampandrosoana ny hotely fananana amin'ny tsena ifotony toa ny Cote d'Ivoire sy Senegal ny vondrona, fa ny dingana faharoa amin'ny fampandrosoana kosa dia hifantoka amin'ny fifanarahana fitantanana, ary hiteraka portfolio izay ahitana trano fandraisam-bahiny 75% sy hotely tantanana 25% . Nanazava i Oshaka: “Afrika araka ny fantatsika, dia mijaly amin'ny tsy fahampian'ny fananana mamaly ny filan'ny mpandeha maoderina. Ny faritra dia miaraka amin'ny fanamby indrindra amin'ny lafiny famatsiam-bola, lojisialy ary mpiasa mahay. Rehefa dinihina ireo lafin-javatra rehetra ireo dia nanangana ny fomba mety indrindra izahay amin'ny drafitra fitomboana mahasalama. ”
Ny adihevitra momba ny sehatry ny hôtely ao amin'ny WAPI dia hanitatra ireo lohahevitra ireo, hanasongadinana ireo tranga mahomby sy ireo tsena sarotra kokoa. Ny fifanakalozan-kevitra koa dia hiompana amin'ireo mari-pamantarana lehibe amin'ny fahombiazan'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny tsenan'i Afrika Andrefana.
Pacific Conference Insights Conference dia mandinika ny hoavin'ny fizahan-tany any Pasifika
Zagreb hampiantrano ny MCE CEE andiany faha-8